ဂိမ်းဆိုင်မှာ​ပြေး​ပြေး​​ဆော့ရတဲ့ စိုက်ပျိုး​ရေးဂိမ်း Harvest Moon ဂိမ်းကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ် | Kingdom of news
ဂိမ်းဆိုင်မှာ​ပြေး​ပြေး​​ဆော့ရတဲ့ စိုက်ပျိုး​ရေးဂိမ်း Harvest Moon ဂိမ်းကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်
P2,P1(Playstation 1,2) ဂိမ်းကစားသမား​တွေ အကြိုက်ငယ်ငယ်ကဆိုဂိမ်းဆိုင်မှာ​ပြေး​ပြေး​​ဆော့ရတဲ့ စိုက်ပျိုး​ရေးဂိမ်း Harvest Moon ဂိမ်းကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။အခုကျွန်​တော်တို့ဒီဘက်​ခေတ်​ရောက်လာပြီဆို​တော့အလိုဂိမ်းမျိုးကိုဖုန်းထဲမှာတင်​ဆော့​လို့ရ​နေပါပြီ။ဒီ​နေ့ငယ်ငယ်က​ဆော့ခဲ့တဲ့စိုက်ပျိုး​ရေးဂိမ်းအလားတူဖုန်းဂိမ်း​လေး​တွေကိုကျွန်​တော် download linkနဲ့ဆွဲ့လို့ရ​အောင်ချ​ပေးထားပါတယ်။အားလုံးအဆင်​ပြေ​ပြေ​ဆော့ကစားနိုင်ကြပါ​စေ။
P2,P1(Playstation 1,2) ဂိမ္းကစားသမား​ေတြ အႀကိဳက္ငယ္ငယ္ကဆိုဂိမ္းဆိုင္မွာ​ေျပး​ေျပး​​ေဆာ့ရတဲ့ စိုက္ပ်ိဳး​ေရးဂိမ္း Harvest Moon ဂိမ္းကိုမွတ္မိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။အခုကြၽန္​ေတာ္တို႔ဒီဘက္​ေခတ္​ေရာက္လာၿပီဆို​ေတာ့အလိုဂိမ္းမ်ိဳးကိုဖုန္းထဲမွာတင္​ေဆာ့​လို႔ရ​ေနပါၿပီ။ဒီ​ေန႔ငယ္ငယ္က​ေဆာ့ခဲ့တဲ့စိုက္ပ်ိဳး​ေရးဂိမ္းအလားတူဖုန္းဂိမ္း​ေလး​ေတြကိုကြၽန္​ေတာ္ download linkနဲ႔ဆြဲ႕လို႔ရ​ေအာင္ခ်​ေပးထားပါတယ္။အားလုံးအဆင္​ေျပ​ေျပ​ေဆာ့ကစားႏိုင္ၾကပါ​ေစ။
Games List For Android
1. Harvest Master
2. Country Life Harvest Day
3. Stardrew Valley
4. Tiny Pixel Farm
5. Harvest Moom
7. Pocket Harvest
ရေမကူးသင့်သည့် ပြန်လမ်းမရှိသော နေရာ(၈)ခု
“လူတိုင်းနီးပါးကြိုက်တဲ့အသားတုကို ဘာနဲ့ လုပ်ထားတာလဲဆိုတာရော တွေးကြည့်ဖူးလား?”
“မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်ရင် သိထားသင့်တဲ့ တန်ဆောင်မုန်း လဆုတ် (၁၀) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် အမျိုးသားနေ့”
လိဒ်နဲ့ပွဲစဉ်က စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်အလက်များ